USWELEKE NJANI UDADE KAMARK WAHLBERG UDEBBIE WAHLBERG? WIKI: HAYI - IINDABA
Wasweleka njani udade kaMark Wahlberg uDebbie Wahlberg? Wiki: Hayi
Wayengubani uDebbie Wahlberg?
Uzalelwe uDeborah Ellen Wahlberg ngomhla wesibhozo kuJulayi 1960 eBoston, eMassachusetts eUSA, wayengudade womhlekisi owaziwayo, umlingisi, umvelisi, usomashishini, owayesakuba yindoda, umlobi weengoma kunye nombhali wengoma, uMark Wahlberg. UDebbie uhlala engaphandle kwelona xesha libalulekileyo ebomini bakhe, engazange amkele ubukhazikhazi nobukhazikhazi obunanditshwa ngumzi waseWahlberg. Wanika ngo-2003.
Ubomi bokuqala, Bazali, iMfundo
UDebbie wazalwa engumntwana wesixhenxe kaDonald Wahlberg, owayesebenza njengomqhubi wobonelelo, kunye neqabane lakhe u-Alma Wahlberg, bavuma ngomsebenzi wakhe njengonobhala weziko lezemali, kunye nomncedisi wabongikazi. Umama wakhe ukwabizwa ngokuba ngumnini-nye we-Wahlburger Restaurant Chain, kwaye njengelungu elibalulekileyo lomdlalo weTV wase-Wahlburgers. Umama notata kaDebbie baqhawula umtshato kwi-1982 kwaye kwiminyaka emibini kamva, umama wakhe u-Alma waphinda watshata noMark Conroy. Ngelishwa, azikho iinkcukacha ezininzi malunga nokufikisa kukaDebbie kunye noqeqesho lwakhe, njengoko wayegcina uninzi lweenkcukacha zakhe zabucala ezifihliweyo kuluntu ngokubanzi.
Ubhuti omdala kaDebbie nguArthur Wahlberg, owazalwa ngomhla we-17th kaJuni 1963; ungumdlali weqonga, inkwenkwezi yeTV yokwenyani, kunye nomchweli ngokufanelekileyo, owaziwayo kwihlabathi ngokubonisa kwiimovie ezinje ngeMilkweed kwi2013, nakwiNgqondo Yam, efanayo yr. Ukongeze wadlala indima kumdlalo bhanyabhanya ohlekisayo u-Rude, uMad, kunye noMnandi, phakathi kweendima ezahlukeneyo.
Okulandelayo emgceni yayinguPaul noJim; UPaul unokuba ngumdlali weqonga, inkwenkwezi yokwenyani kunye nompheki, ngokuzingca ngokuba nendawo yakhe yokutyela ebizwa ngokuba yiAlma Nove. UPaul uboniswe kwimiboniso bhanyabhanya efana noMax Payne (2008), kunye nokwenzeka kwinto eyenzekileyo (2008), ngelixa eyinkwenkwezi ngokulandelelana ngokulandelelana kweTV Wahlburgers. UJim ujonge ngakumbi kububele kunokuba exhalabile kwiinkampani zasekhaya, etyelele kunye nomntakwabo uMarko ekuncediseni abantwana abanamalungelo. Ungumyeni notata othembekileyo, uhlala kunye neqabane lakhe kunye nabantwana eSouth Florida. Akukho zinkcukacha malunga noodade bakaDebbie, uTracey noMichelle. Ke, makhe sijonge kubomi bamalungu ongezelelweyo anenzuzo kumzi waseWahlberg.
URobert wafika apha emhlabeni nge-18th kaDisemba 1967; Ukulandela abantakwabo kwilizwe lokuzonwabisa, ukongeze inani lemiboniso bhanyabhanya enenzuzo, esenza amatyala akhe kumdlalo bhanyabhanya uSouthie ka-1998, emva koko wabonisa ngaphakathi kumdlalo bhanyabhanya Ukutshintshiselana ngo-2000. Ngo-2001 wabonakala emva kukaJeff Bridges kumdlalo weqonga Imiboniso bhanyabhanya yoLwaphulo-mthetho, ngelixa ngo-2002 wayenesikhundla esincinci ngaphakathi kumdlalo bhanyabhanya wezothando uMoonlight Mile, edlala indawo kaJake Gyllenhaal, uDustin Hoffman noSusan Sarandon. Uqhubekile nomsebenzi wakhe wokuvela kwimiboniso bhanyabhanya enje ngeMystic River (2003), Gone Baby Gone (2007), Contraband (2012) -enkwenkwezi nomntakwabo uMark- kunye ne -Equalizer kwi2014.
UDonnie Wahlberg wazalwa ngomhla we-17th ka-Agasti 1969 kwaye ngumntwana wesibini omncinci; Uye wanikela ngobomi bakhe emculweni, nakwimovie ngokufanelekileyo, kwaye waziwa kakhulu kwihlabathi kuba ilungu elisekwayo leqela lomfana elithandwayo iNew Kids kwiBhloko. Ngaphandle komculo, uDonnie ubonakalisile kwimiboniso bhanyabhanya enje ngeSixth Sense, iSaw franchise, kwaye ungumlingisi ophambili kulandelelwano lomdlalo weTV uBlue Bloods, phakathi kweendima ezahlukeneyo.
UMark, oyena mncinci waseWahlberg wazalwa ngomhla wesihlanu kuJuni 1972; uyimvumi, umvelisi, kunye nomdlali weqonga, owaziwayo ngendima yakhe kwiimovie ezinje ngeTransformers franchise, uMax Payne (2008), Umsebenzi waseNtaliyane (2003), kunye nePlanethi yee-Apes, phakathi kweendima ezininzi ezahlukeneyo. Unokuba yimvumi ephumeleleyo, oqala iqela uMarky Mark kunye neFunky Bunch, athe wasungula naye ii-albhamu ezimbini zestudiyo soMculo waBantu (1991), kwaye Wena Uyakholelwa. Kwiminyaka yakhe yeshumi elivisayo, uMarko wayeyinxalenye yaBantwana abaDala kwiqela leBlock boy kunye nomntakwabo uDonnie, nangona kunjalo walishiya iqela emva kweenyanga ezimbalwa.
Umsebenzi kaDebbie Wahlberg kunye neNet Worth
UDebbie uchithe ubomi bakhe kude neekhamera, engakulangazeleli ukuba nexhala kumashishini abonisa. Wakhokela ubomi obuzolileyo, kwaye ngenxa yoko, akukho datha malunga nokuba wenzeleni ukuhlala. Oku kongezwa kwixabiso lakhe lewebhu, kuba imithombo ikukufumanisa ukuba usisityebi kangakanani uDebbie Wahlberg, ngexesha lokufa kwakhe.
Ngaba Uyazi Unobangela Wokufa kukaDebbie?
Kwiminyaka yakhe yokugqibela yobomi, uDebbie wayenemicimbi kunye nezintso zakhe; ngokungqinelana namava ogqirha, wayenamatye kwizintso zakhe, efuna utyando. Inkqubo yacwangciswa kwikliniki yaseBoston ngomhla we-2 kuSeptemba 2003; yayikukusebenza nje kwesiqhelo, nangona kunjalo indlela engafanelekanga njengoko uDebbie wayefumana ukothuka kwaye enye intsholongwane egazini lakhe, ikhokelela ekufeni kwakhe. UDebbie wanikezela ngosuku olufanayo intombi kaMark Wahlberg, uElla Rae wazalwa.
Izigaba: Inetflix Iwiki Umqala
mingaphi iminyaka ka danielle
Zingaphi izihlandlo apho utshatileyo ukumkani watshata
Kaitlyn bristowe ngotyando lweplastiki
umnqweno washington ngoku 2020
chanel iifutshane zonxweme olusentshona
kutheni uJadzia ebulewe